Faritra Menabe: nijery ny olan’ny fizahantany ireo minisitra | NewsMada
Faritra Menabe: nijery ny olan’ny fizahantany ireo minisitra
Mba tsy halaza ratsy intsony. Nidina tany Menabe ireo minisitra roa ahitana ny avy amin’ny Fizahantany, Razafitsiandraofa Brunelle, sy ny eo anivon’ny Tontolo iainana, Randriatefiarison Guillaume, ny faran’ny herinandro teo. Nanatrika ny “Festival Baobab Fosa” izy ireo. Natao rahateo ity hetsika ity hanairana ireo tompon’andraikitra sy ny olom-pirenena, hiaro ny fizahantany sy ny tontolo iainana. Nisedra olona rahateo ny fizahantany tany amin’ny faritr’i Menabe noho ny tsy fandriampahalemana. Nihena ho 1 5000 ny isan’ny mpizahatany tamin’ity taona ity raha 30 000 izany tamin’ny taon-dasa. Etsy andaniny, tandindonin-doza koa ny baobab sy ny fosa, mampiavaka an’i Morondava, noho ny doro tanety mahazo vahana, tato ho ato.
Na izany aza, efa nisy ny fandraisana fepetra amin’ny fametrahana tobi-miaramila amin’ireo faritra mafana. Nojeren’ireto minisitra ireto ny fiantraikan’izany eo amin’ny fiainan’ny mponina. Fantatra fa nihena ny tsy fandriampahalemana. Tahaka izany koa ny ady atao amin’ny ady amin’ny doro tanety sy doro ala.
Hetahetan’ny mponina ny hametrahana seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ao Morondava fa tsy mandalo Antananarivo intsony. Hampiakarina intelo isan-taona ireo sambo goavana miditra any amin’iny faritra iny, hampitombo ireo mpizahatany mandalo any Menabe.
Notolorana mari-pamantarana (badge) tamin’izany hetsika izany ireo mpiseradia matihanina. Teo koa ny hetsika momba ny kolontsaina sy ny fanatanjahatena miaraka amin’ireo tranoheva. Manampy izany ny fihaonan’ny minisitry ny Fizahantany tamin’ireo mpandraharaha any Menabe.